Farmaajo mise Rooble: Yaa qaadaya mas'uuliyada muddo kororsiga cusub ee socda? - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo mise Rooble: Yaa qaadaya mas’uuliyada muddo kororsiga cusub ee socda?
Farmaajo mise Rooble: Yaa qaadaya mas’uuliyada muddo kororsiga cusub ee socda?
Muqdisho (Caasimada Online) – Tan iyo markii ay dalka si rasmi ah uga bilaabatay doorashada iska daba dheeraatay, ayaa waxaa marba sii kordhayay mudada ay madaxweynaha iyo dowladda hadda jira ay dalka ku xukumayaan sharciyad la’aan.
Doorashada Aqalka Sare ee Soomaaliya oo bilaabatay 29-kii July, ayaa waxay socotay 108 maalmood, oo ah in ka badan saddex bil iyo bar, waxaana lagu dooranayey mudadaas 54 Senator oo keli ah.
Sidoo kale waxaa dhawaan si hordhaca ah magaalada Muqdisho uga bilaabatay doorashada Golaha Shacabka, oo ayadu ka baaxad iyo shaqo badan midda Aqalka Sare, taasi oo sii kordhinaysa muddo kororsiga dadban ee ka socda Villa Somalia.
Muddo kororsi dadba
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ayaa shaaciyey in dalka uu ka socdo muddo kororsigii laga badbaadiyey, kaasi oo dagaal xoogan ka riday magaalada Muqdisho.
Haddaba, Yaa qaadaya mas’uuliyada muddo kororsiga sida dadban u hirgelay?
Sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda waxaa mas’uuliyada u weyn ee muddo kororsiga dadban ee ka socda Villa Somalia dusha u ridanaya ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Farmaajo ayaa iska wareejiyay gacan ku haynta arrimaha doorashooyinka iyo amniga, taasi oo uu ku wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble oo ah mas’uulka u sareeya ee hagaya doorashada xiligan socota.
Rooble waxa uu kasoo bixi waayey mas’uuliyaddii loo dhiibtay, wuxuuna qeyb ka noqday xarig jiidka siyaasadeed ee dalka, isaga oo ku mashquulay khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahneyn iyo xilal magacaabis joogto ah.
Caasimada Online ayaa ogaatay in ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, oo doonaya inuu xilka sii haysto, maadaama madaxweyne cusub ay ka dhigan tahay inuu meesha ka baxayo.